Warar - Maxay yihiin faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka dharka caaggu ka sameysan yahay
Maxay yihiin faa'iidooyinka iyo faa'iido darrooyinka dharka caagga ah
I. Faa'iidooyinka dharka caagga:
1. Dharka Polyester-ku wuxuu leeyahay awood sare. Awoodda fiber-ka daruuriga ahi waa 2.6 ~ BAI5.7 cN / Dtex, xoogga fiber-ka-sare waa 5.6 ~ 8.0cN / Dtex. Sababtoo ah hantideeda 'hygroscopic low', xooggeeda qoyan iyo xoogga qallalan asal ahaan waa isku mid. Awoodda saameynteeda ayaa 4 jeer ka sarreysa tan nylon iyo 20 jeer ka sarreysa tan fiyuuska viscose ah.
2. Dabacsanaanta Super ee dharka caagagga. Qaybta laastikada ah waa 22 ~ 141cN / dtex, 2 ~ 3 jeer ayay ka sarreysaa tan naylonka, taas oo aan la mid ahayn dharka kale.
3. Dharka Polyester-ku wuxuu leeyahay iska caabin kuleyl wanaagsan. Waxaa la dhihi karaa dacron waa kan ugu adag ee u adkaysta uguna jilicsan dharka kiimikada kiimikada ah. Haddii laga sameeyay goonno jilicsan, waxay si fiican u ilaalin kartaa jilicsanaanta iyada oo aan aad loo xirin.
Ii. Faa'iido darrooyinka dharka caagga:
1. nuugista qoyaanka oo liidata, nuugista dharka caarada oo caag ah, sidaa darteed dharka caaggu wuxuu yeelan doonaa dareen kulul, oo leh electrostatic fudud, infekshinka boodhka, saameynta quruxda iyo raaxada, laakiin nadiifinta ka dib waa mid aad u fudud oo caajis badan, iyo xoogga qoyan ku dhowaad ma hoos u dhac, wax-beddel la'aan, waxay leedahay hawl aad u wanaagsan oo la gashado.
2. Hanti diiran oo liidata. Sababtoo ah ma jiro hiddo-qaade gaar ah oo dheehan oo ku yaal silsiladda molikal polyester-ka iyo kala-baxa ayaa yar, dheehidda ayaa ah mid aad u adag oo fudud in la dheeho
3, way fududahay in la buufiyo, dharka caaggu waa mid ka mid ah badeecada fiber-ka synthetic, markasta oo dharka fiber fiber-ka ee synthetic uu leeyahay goobta pilling, alaabada dharka polyester ee la isticmaalo in muddo ah ayaa yeelan doona goobta pilling.
Hangzhou Dro Textile waa xirfadle soo saaraha dharka caaga ah. Ku soo dhowow wadatashiga